ရွှေရင်နှစ်မွှာကို အထင်းသား လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ – Online News Post
ရွှေရင်နှစ်မွှာကို အထင်းသား လှစ်ဟပြလိုက်တဲ့ သဇင်ဦးရဲ့ အကြမ်းစား ပုံရိပ်လေးများ
သွယ်လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ ဆက်ဆီ သဇင်ဦးကို သိကြ မယ် ထင်ပါ တယ် ။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှုမောစရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ ပုရိသတွေရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူထားတဲ့ အလန်း စား မော်ဒယ်လ် သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ်ပါ တယ် ။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အတူ လှပ ကြည်လင် တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီ ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေနဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင်သူလေးလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ဗီဒီယိုလေး တွေကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ်တွင် အများဆုံး တင်လေ့ရှိတာ လည်းတွေ့ ရပါတယ် ။ လတ် တလော မှာတော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှ တရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစားထား တဲ့ အလန်းစား ပုံလေးကို ဖော်ပြ ထားတာတွေ့ရ ပါတယ် ။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှုသူတွေ များပြားခဲ့တာဖြစ် ပြီး ပုရိသတွေ အများဆုံး ဝန်းရံ ခြင်းခံ နေရတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။
ပုံလေး ထဲမှာ သဇင်ဦး တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လှရက်လွန်း နေတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ် ။ သူမရဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် အလှ က တော့ မြင်သူ တိုင်း ငေးလောက် အောင်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစားနေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ချစ်ပရိသတ် ကြီးလည်း သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက် စား ပုံလေးကို ကြည့်ရှု နိုင်စေရန် ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ် နော် … .
သြယ္လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထားတဲ့ ဆက္ဆီ သဇင္ဦးကို သိၾက မယ္ ထင္ပါ တယ္ ။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈေမာစရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလးေတြနဲ႔ ပုရိသေတြရဲ့ ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူထားတဲ့ အလန္း စား ေမာ္ဒယ္လ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလးျဖစ္ပါ တယ္ ။ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာကိုယ္နဲ႔ အတူ လွပ ၾကည္လင္ တဲ့ အသားအေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီ က်တဲ့ သူမရဲ့ အမိုက္စား ပုံေတြနဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္သူေလးလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် ဗီဒီယိုေလး ေတြကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚတြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ရွိတာ လည္းေတြ႕ ရပါတယ္ ။ လတ္ တေလာ မွာေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား အလွ တရား ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားထား တဲ့ အလန္းစား ပုံေလးကို ေဖာ္ၿပ ထားတာေတြ႕ရ ပါတယ္ ။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈသူေတြ မ်ားျပားခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး ပုရိသေတြ အမ်ားဆုံး ဝန္းရံ ျခင္းခံ ေနရတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။
ပုံေလး ထဲမွာ သဇင္ဦး တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္မႈ ရွိရွိနဲ႔ လွရက္လြန္း ေနတာလည္း ျဖစ္ပါ တယ္ ။ သူမရဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ အလွ က ေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငးေလာက္ ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစားေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီးလည္း သဇင္ဦး ရဲ့ အမိုက္ စား ပုံေလးကို ၾကည့္ရႈ နိုင္ေစရန္ ေဖာ္ျပေပး လိုက္ပါတယ္ ေနာ္ … .
Previous post ပုရိသတို့ရဲ့ ရင်ခုန်နှုန်းကို အဆမတန်မြင့်သွားစေမယ့် ဆက်ဆီကျကျနဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့ နန်းအမရာ
Next post အတွင်းသား ကောက်ကြောင်း အလှလေးတွေ ပေါ်လွင်အောင် ဆက်ဆီကျလွန်းနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် အယ်လာရဲ့ အမိုက်စားပုံလေးများ